Akụkọ Kate Zeid na Martech Zone |
Edemede site na Kate Zeid
Kate Zeid, Hey DAN Uto & Ọrụ SVP: Ụlọ ọrụ nne na nna Hey DAN Civicom goro ka ọ weta ngwaahịa ọhụrụ n'ahịa n'ofe otu ahụ na 2005, Kate Zeid na-eduzi otu mmepe na ọrụ Hey DAN. Kate na-arụ ọrụ n'ofe mmepe ngwaahịa, ịzụ ahịa, ọrụ ndị ahịa na nkà ma na-aga n'ihu na-akwalite uto ego ha nwetara site na itinye ego na ọgbọ ọzọ.
Enwere naanị ọtụtụ nzukọ ị ga-abanye n'ime ụbọchị gị yana enweghị oge zuru ezu iji dekọọ isi ihe mmetụ ahụ bara uru. Ọbụna tupu ọrịa na-efe efe, ndị otu ahịa na ndị na-ere ahịa na-enwekarị nzukọ mpụga 9 kwa ụbọchị ma ugbu a nwere akwa akwa na ngwakọ na-arụ ọrụ maka ogologo oge, ọnụ ọgụgụ nzukọ ọgbakọ na-arị elu. Idebe ndekọ ziri ezi nke nzukọ ndị a iji hụ na a na-azụlite mmekọrịta yana data kọntaktị bara uru anaghị efu efu aghọwo ihe